सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य प्रचण्डजीकै हुनेछ - Pahilo News
सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य प्रचण्डजीकै हुनेछ
केपी ओली सरकार हट्यो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले के भइरहेको छ ?
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा मुलुकमा जुन खालको राजनीतिक अवस्था देखा प-यो, त्यसलाई हल गर्न नसकेकै कारण हामीले विकल्प खोजेका हौँ । ओली नेतृत्वको सरकारले आदिवासी–जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, दलित आदिका समस्या समाधानमा चासो नदेखाएकै कारण मधेस आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यति मात्र होइन, जसरी केही ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले गलत खालको संविधान जारी गरे, त्यो संविधानले विभिन्न खाले समस्या उब्जाएपछि तराई–मधेस मात्र होइन, सबै तह र तप्काले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । मधेस आन्दोलन पनि त्यसैको एक अङ्ग हो । यसलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनपछि पुष्पकमल दाहाल तपाईंहरुकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ । अब त तपाईंहरुका समस्या समाधान होलान् नि ?
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस–माओवादीका बीचको गठबन्धनका कारणले मात्र होइन, हामीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा नै निर्वाचित हुनुभएको हो । तीन बुँदे सहमति जन्मिएको नै मुख्यगरी संविधान संशोधन गर्ने, पुर्नलेखन गर्ने र खासगरेर मधेसी, आदिवासी–जनजातिका सवालहरुलाई हल गर्ने भनेर हो । त्यसैले यो सरकारले गर्ने के हो र प्राथमिकता के हो भनेर अल्मलिनुपर्ने केही कारण छैन । यदि सरकारले त्यसो गर्न चाहेन, गर्न मानेन वा अलमल ग¥यो भने हामीले समर्थन गरेका हौँ भनेर काँध हालेर बस्ने कुरा हुँदैन, काँध झिकिन्छ ।
त्यसो भए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ढिलासुस्तीका कारण तपाईंहरु विस्तारै असन्तुष्ट बन्दै जानुभएको छ भन्ने बुझ्नुप¥यो होइन त ?
केही पनि भएको छैन भन्न त मिल्दैन । अलिअलि त भएको छ । सहिद घोषण गर्ने, सहिद परिवारलाई राहत दिने जस्ता काम भएका छन् । तर, जुन गतिले काम हुनुपर्ने हो, त्यो चाँहि नभएकै हो । मूल मुद्दा भनेको राजनीतिक हो, संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन हो । त्यसलाई हल गर्ने दिशामा चाँहि सरकार सुस्त देखिएको छ । हामीले अझै पनि भन्दै आएका छौँ– अब पनि ढिलासुस्ती गर्ने हो भने समस्या आउँछ । सरकारले तीन बुँदेमा गरेका सहमतिलाई अलिकति पनि ढिलासुस्ती नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
ढिलासुस्ती भएकै कारण सरकारको आयु घट्दै गयो भन्न थाल्नुभएको हो ?
त्यो अभिव्यक्तिलाई प्रचण्डजीले बुझ्नुपर्छ । उहाँ जुन बचनबद्धताका साथ वा सहमतिका साथ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो, त्यसलाई पालना गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । छलछाम वा अन्य उपायबाट उहाँले सरकारको आयु लम्ब्याउन खोज्नुभयो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । त्यसले चारैतिर शंका–उपशंका उत्पन्न हुन थालेका छन् ।
यही अवस्थामा सरकारलाई मधेसी मोर्चाको समर्थन रहिरहन्छ त ?
हामीले अहिले पनि उहाँलाई तीन बुँदे सहमतिको पालना गर्नुहोस् भनेका छौँ । त्यो भयो भने हाम्रो पूरा समर्थन रहनेछ । त्यसो भयो भने हामी सरकारमा सहभागी नभएर पनि सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं । सहमति कार्यान्वय भएन भने समर्थन के का लागि ? त्यो कुरा हामीले होइन, प्रचण्डजीले सोच्नुपर्छ ।
यही अवस्थामा तपाईँहरु सरकारमा जाने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामीले सरकारका विषयमा केही पनि सोचेका छैनौँ । सरकार उहाँहरुले नै चलाउँदा हुन्छ । तर, भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र उहाँहरुले राम्रो काम गर्नुपर्छ । देश र जनतालाई राहत र सुशासन दिन सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ । मुलुकलाई गलत संविधानबाट बन्धक बनाइएको छ । त्यसबाट सबैले पार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
तर अहिलेको अवस्थामा तपाईंहरुले भने जस्तो संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन सम्भव होला र ? त्यसका लागि त एमालेको पनि साथ चहिएला नि ?
हामीले कांग्रेस–माओवादीसँग मात्रै दुई तिहाई मत छ भनेर समर्थन गरेका होइनौँ । तर, उहाँहरुले प्रक्रिया त अघि बढाउनु प¥यो नि ! सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि अरु दलसँग छलफल र सहमति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
तपाईंहरुको माग सम्बोधन भएनन् भने प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ कि चुप लागेर बस्नुहुन्छ ?
हामी कुर्नेवाला छैनौँ । आन्दोलन अघि बढ्छ । समर्थनको कुरै छाड्नुहोस्, भीषण जनआन्दोलन सुरु हुन्छ । त्यो जनआन्दोलनले संभवतः यो संविधानलाई बर्खास्त गर्नेछ । प्रचण्डजीका लागि यो ठूलो मौका हो । उहाँले समस्या हल गर्न सक्नुभयो भने प्रचण्ड नै बन्नुहोला । तर, सबैभन्दा दुर्भाग्य उहाँकै हुनेछ ।
अहिले पनि तपाईंहरु तराई–मधेसतिरै हुनुहुन्छ । यता वार्ता–सम्वाद नथालेर केका लागि जानुभएको हो ?
हामी देशैभरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ । हाम्रा माग पूरा भए हामी आन्दोलनमा जाँदैनौँ, नभए जान्छौँ । अहिले दुबै बाटा खुला राखेका छौँ । यो कुरा सरकारमै निर्भर छ ।